त्रिभुवन नमुना मावि खर्वाङको वार्षिकोत्सवको तयारी पूरा, उद्घाटनका लागि प्रदेश मन्त्री बस्नेत आउने ! – ebaglung.com
२०७५ पुष ८, आईतवार २०:०८	Top News, अन्य समाचार, थप समाचार
कमल पौडेल, बडीगाड बागलुङ २०७५ पुस ८ । त्रिभुवन नमुना माध्यमिक विद्यालय बडीगाड गाउँपालिका खर्वाङको सोमबार देखी सुरु हुने ५९ औं वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवसको सम्पूर्ण तयारी पुरा भएको छ । सोमवार गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण वस्नेतले उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम निश्चित गरिएको छ ।
यसै विच कार्यक्रमको पूर्व सन्ध्यामा आईतवार संचालन गरिएको छात्रा कपड्डी प्रतियोगितामा माध्यमिक तहका कक्षा ११ तथा १२ को समुहले जीत हात पारेको छ । त्यस्तै प्रथम त्रिभुवन आइडल प्रतिस्पर्धाको चौथो चरण सम्मका कार्यक्रम सम्पन्न भएका छन् । सो प्रतियोगितावाट उत्कृष्ठ ५ मा छनौट भएका छन । फाइनल चरणमा छनौट हुनेमा सीतल भुसाल, शिशिर शेरचन, यमुना पुन, सचिना विक, सिर्जना नेपाली रहेका छन्। जसको फाइनल चरणको कार्यक्रम सोमवार देखि सुरु हुने सहायक प्रधानाध्यापक तथा सुचना अधिकारी शिव पोखरेलले जानकारी दिए ।
त्यस्तै सोमवार अन्तर विद्यालयस्तरीय वक्तृत्वकला प्रतियोगिता, अन्तरसदनात्मक पिटी प्रदर्शन, साँस्कृतिक कार्यक्रम, खेलकुद कार्यक्रमको लागी आवश्यक सवै तयारी पुरा भएको प्रधानाध्यापक ढालमणि भण्डारीले बताए ।
२०१७ साल पौस ९ गते दगातुन्डाडाको वडा नं. ६ नेटामा स्थापना भएको त्रिभुवन प्राथमिक विद्यालय २०२८ सालमा दगातुन्डाडा ७ को दनिया हुँदै २०५६ सालमा खर्वाङमा स्थानान्तरण भएको थियो ।
प्राथमिक तहवाट शुरु भएको विद्यालय निमावि, मावि, हुँदै मावि तह (कक्षा ११ तथा १२)मा शिक्षा, मानविकी र व्यावस्थापन संकायमा पठन पाठन हुँदै आएको छ ।
बागलुङ जिल्लाको क्षेत्र नं. ३ को शैक्षिक गुणस्तरमा पहिलो भएको विद्यालयमा कक्षा १ देखिनै कम्प्यूटर शिक्षा तथा अंग्रेजी माध्यमबाट समेत पठनपाठन हुँदै आएको छ । विद्यालयले सामुदायिक विद्यालय मध्य बागलुङमै पहिलो पटक विद्यार्थीहरुको लागी स्कुल वस समेत संचालन गरेको छ ।